Izingane amalogo amaqembu ezindaweni ezahlukene kukhona ezibaluleke kakhulu. Okokuqala, ukukhiqizwa kwanoma umdlalo ucosha imfanelo kubahlanganyeli ukulwa umoya wokuncintisana. Okwesibili, umfanekiso ofanayo esihlanganisa iqembu kanye nabalandeli. Okwesithathu, izinto kancane Cabangisisa ngcono isimo bonke abahlanganyeli. Kodwa logo luqhutshwa hhayi kuphela imincintiswano izingane ahlukahlukene, kodwa futhi kwezemidlalo, futhi ezinkampanini ezinkulu.
Lapho ukusebenzisa izimpawu ehlukile?
Ngaphambili, ephakeme, imikhaya yizicukuthwane zingafani Crest umndeni. Lezi amalogo wawuhlotshiswe amafulegi of ukuthutha, umngcele uma ungena ulidle, ngezinye izikhathi umsebenzi womfekethisi izingubo. Khumbula indaba ethandwa logo "Ferrari" imoto? Barack umndeni Italian wanikeza umkhaya wabo logo prancing inkunzi Enzo Ferrari. uwuphawu Olumangalisayo (logo) iba inkampani brand, lula ukuzikhumbula abathengi ezingase zivele, ngakho inkampani ugwema izimbangi zayo ngenxa isithombe ngabanye.
Kwezemidlalo futhi usebenzise i kufanekisa engavamile. Ilogo iqembu yezemidlalo kumele aqondakale futhi wabekela abalandeli, kanye libonise imigomo abawugijimayo. logo Simple siveza incwadi edingekayo, imibala ehlukene. Ngokwesibonelo, abalandeli ezahlukene football club zihlukaniswa scarves igqamile, ibonisa imibala yaleli qembu. Kukhona amaphosta esongela imvelo (ngokumamatheka isilwane, amademoni) ngubani nasengqondweni zingaphazamisi izimbangi.
Abagqugquzeli imincintiswano ithelevishini yezingane imincintiswano, abaholi emakamu ukhethe logo umbala, isimo nabanomusa esihambelanayo yobudala izingane, indaba ephathwayo izenzakalo.
Shock uwuphawu, uphawu, uphawu. Abakwazi kutshengiseke Uhlaka: embuthanweni, a okusaqanda isihlangu. Ngena ngemvume waveza ngomfanekiso, ngezinhlamvu noma yinombolo, uphawu abstract. Umbhalo ivuliwe isithombe, emhlabeni noma ngokusebenzisa.
Ngaphambi kokuba uqale ngokwenza ilogo iqembu, kudingeka ucabangele amaphuzu alandelayo:
Uma udinga iqembu ukuxazulula inkinga yesikhashana (imincintiswano, KVN, imidlalo yengqondo ebhaliwe, ikamu ehlobo), isibonakaliso kufanele luhambisane izihloko lomcimbi. Ngokwesibonelo, i-logo ne isithombe izingane izibuko, waba nezimfanelo esikoleni (izincwadi, izincwadi, ibhodi lesikole, pointer) ukudalula ubunjalo imincintiswano bokusungula. Khona-ke iqembu elingangena ngokuphepha ngokuthi "Znayka", "Who Knows?", "Lyuboznaykami", "nezihlakaniphi".
Ilogo, isiqubulo, iziqubulo kumele achaze sihloko lomcimbi. Uma igama liwuphawu ithimba alisho okushiwo mncintiswano ke sithi kufanele uchaze umcondvo lobalulekile. Ngokwesibonelo, i-logo ithimba lezemidlalo ngesimo i orange ubukeka ebhalwe endaweni engafanele, ke isiqubulo zobungane bangasephula wamalungu eqembu njengoba tincetu orange, wembula target, izinga kwabo bebonke.
Uma lo msebenzi kuyinto eqhubekayo (ezemidlalo ukumaketha umkhiqizo, ilogo ye-semfundo), khona-ke kukhethwa izimpawu udinga asondele ngokuphelele. Omunye ukaputeni Vrungel wathi: "Indlela ngomkhumbi ucingo, ngakho-ke ngeke yini ukuntanta." Lapha umthetho usebenza ngendlela efanayo. Ilogo ziwumthwalo isigxivizo oseqenjini, siqu, izinga collective kuthinta umnqopho wayo futhi sifinyelele imiphumela.
Ilogo iqembu ukuba ezemidlalo zibe yinto beacon wokunqoba, umthombo wamandla zamabutho yangaphakathi. Uma logo oseqenjini le-basketball sika idemoni, cishe, umbambiqhaza ngamunye ngizoya ukunqoba kumnyama kubomvu. Umfanekiso penguins, nabanomusa kakhulu kungafaneleki, ngoba basketball kudinga isiyalo, ukuzinikezela, ukuzimisela, ubungqabavu, quickness.
Ngakho, logo kufanele ibonise uhlobo ezemidlalo (hockey induku, ibhola, isibhakela amagilavu) Ukusebenza Team (umdanso, ukulwa, imincintiswano bokusungula), izinga abahlanganyeli (isib, isivinini - gxuma isilwane, flying inyoni - umfanekiso uklebe, le ingulule).
Hand logo inketho
Kungcono ukudala logo kanye nabo bonke ababambe iqhaza. Bhala phansi zonke izinhlangano, iziphakamiso, imibono ngosayizi ithimba, umumo, sakhiwo izimpawu, isiqubulo. Ilokhu siyise isihloko somcimbi, izimfanelo siqu futhi bebonke. Khumbula futhi ukuthi iziqubulo namalogo amaqembu kufanele kuvumelane.
Manje Busakazekela logo ipensela:
Dweba isimo (indilinga, inkanyezi, isihlangu) ukuchaza ubukhulu logo;
ukudala izifanekiso eziningi, okuzodingeka izithombe ezahlukene, izincazelo, imibala;
Zama ukubhala Isiqubulo noma ithimba igama.
Uma ungazi indlela ukudweba ke podyschu izithombe ezifanele, okungase zihunyushelwe srisovat noma ilogo. Khumbula, i-logo kufanele kube elikhanyayo, icacile, ilula sihlanganise hhayi ningi than ngemibala emithathu.
Inketho elula - kuba ukudweba ukuma logo, bhala igama ithimba isitayela engavamile, ukhethe ifreyimu ngemibala ehlukene kanye iphethini engajwayelekile. Ungase futhi ukhethe igama, ithimba logo ngokuhambisana ikhathuni, echaza ngokugcwele umsebenzi. Ngokwesibonelo, iqembu iyunithi zezingane ngokuthi "Hakuna Matata," khona-ke logo okubonisa nebalingisi labamcoka, isitayela okuphila inquma uhlamvu leqembu (isib, kumnandi futhi awanaki).
Dala amaphosta ngekhompyutha
Inketho elula kakhulu ukudala logo izinhlelo zama-computer. Lokhu konga isikhathi futhi ivumela ukudluliswa logo izingubo, ukwenza izimpawu ezifanayo kubo bonke abahlanganyeli. amaphethini amahle nje zisemaphepheni "Photoshop" Uhlelo, kodwa ungakwazi izame ejwayelekile uhlelo "Paint» (Paint), «Lesigceme» (Igama).
Indlela yokwenza ilogo iqembu usebenzisa uhlelo Paint:
Thola izithombe ezibonisa igama leqembu noma umcimbi isihloko;
Vula wesithombe "Paint";
iqala zifake amalebula ezahlukene, linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso amafonti, ozimele abacaphuni;
yi okubili lelinetitfombe letehlukene, imibala.
Uhlelo "Igama" logo kudalwa kakhulu okufanayo:
ukubhala umbhalo oqoshiwe;
ukusebenzisa ubukhulu yesithombe noma uphawu, isitayela, kombhalo.
Uma ufuna ukuhlanganisa izithombe ezimbalwa, ozimele, amalebula ke udinga ukulanda zonke izithombe, "Lesigceme", shintsha usayizi wesithombe yabo. Khona-ke thatha isithombe usebenzisa ukhiye ekhethekile (Sukumani Nonke Sc Sys RG), vula "Paint" uhlelo. Manje usunganqampula izingxenye okungafunwa, reordered, uphawu.
Ithimba logo for enkulisa, izikole, amakamu
izikhungo zemfundo, amakamu njalo ubambe imincintiswano ehlukahlukene kanye imincintiswano, siqala, umdlalo. Ngokuvamile isihloko izenzakalo iyaphindwa njalo ngonyaka, ngakho othisha ungagcina amandla abo. Ngokwesibonelo, kwesinye isithombe beveza amagama ehlukene, iziqubulo. Vele ukuba inguqulo computer logo, okuyinto umane kudingeka esikhundleni umbhalo, imibala isizinda. Ungalanda agcwalisiwe design logo for izikhathi ezahlukene. Lezi zithombe amahle aqukethe ongakhetha eziningana ukuze iphrintwe.
Kwazi bani ukuthi ukusebenza "Photoshop" Uhlelo, ungakha logo yabo iqembu ngezithukuthuku izici siphelile ingcaca. Kuze kube yimanje, ukumpompa cliparts kuphela. Okokuqala, abazi athwale ukunqwabelanisa ngemuva. Okwesibili, siveza ezihlukahlukene themes (ozimele, amazwibela, izithombe, amaphosta siphelile zemfundo). Okwesithathu, isiqeshana ukuvula yimuphi izinhlelo. Okwesine, angasetshenziswa esikhundleni izingcwecwe ikhabethe.
Ezemidlalo amaphosta for amaqembu zezingane
Yini ama-logo ye amaqembu ezemidlalo ukukhetha?
Phawula izimbangi ku izinga ithimba.
Gqamisa uhlobo ezemidlalo.
Esimweni sokuqala kungenzeka ukuveza izimfanelo yezemidlalo ezifana efana isivinini, isivinini, ukushintsha-shintsha, ukushintsha-shintsha, ukukhuthazela, ubungqabavu, amandla, ukunemba, ukuphikelela nokuzimisela. Ukuze abasekeli kanye nezitha kwaba isibonakaliso esicacile we plan, kwanele ukuba ahumushe izinga yesithombe lesilwane, inyoni, ezokuthutha. Ngokwesibonelo: esheshayo Jaguar, indlovu enamandla, ikamela eziqinile.
Manje ungakhetha logo for the team sizithobe "opopayi" ifomu nge ukuchema kuzo ezemidlalo. Ngokwesibonelo, polar bear ngenduku hockey, penguin ku skates, yikhangaru nge a basketball. Uma lo mkhaya umdlalo imincintiswano, kungenzeka ukuveza abadala nezingane kule ezemidlalo izingubo kanye nemishini. Into esemqoka ukuthi izifanekiselo zezingane babe ezicacile ngombala, kodwa sezigcwele, ngemifanekiso ecacile, kodwa okungenani kuqukethe izingxenyana ezincane.
Izimpawu ze-non-yezemidlalo imincintiswano
izifanekiselo Unsportsmanlike enobuciko, yokuqala, ezimibalabala. Ngokuvamile aveza sihloko emncintiswaneni: dance uhamba, amanothi omculo, izincwadi kanye namaqhawe tetemibhalo, amathuluzi umculi, yezandla ... Ngakho-ke, ku-poster nje ziveza igama ithimba lakhe sendleleni. Isibonelo, uma ithimba ibizwa ngokuthi "Happy beaver", le uwuphawu emncintiswaneni umdwebo ngeke amele i-beaver nge ibhulashi, upende, Iyizeli.
wadala isibonakaliso kulandela Ngo matemu:
Vula uhlelo "Photoshop" version computer logo;
dorisovyvat cap umdwebi, ibhulashi, upende;
Ungakopisha izakhi ezengeziwe umdwebi futhi layering ukuze ungeze isithombe ekhona;
londoloza ilogo iqembu;
uzitholele ukuze ngamunye owayekhona.
Phelelisa le lwendaba zohlelo "Igama", "Paint" kuyinkinga, ikakhulukazi uma ungeke ukwazi ukudweba. Ngaphezu kwalokho, ahlabayo izingxenye, ufaka, ubuyekeza lapho ukuyiprinta ongabonisa Curves, nokushintshashintsha. Ngakho-ke kungcono kahle "Photoshop" noma oda amasevisi kusuka onguchwepheshe.
Ngakho, logo kufanele ifanelane igama leqembu, indaba ephathwayo imisebenzi, ubudala iqhaza, uhlobo nomsebenzi. Ukubona logo kufanele kube elula egqamile, kungekho izingxenye ezincane, aqukethe imibala abangeqile kwabathathu. Ukubona logo, izimbangi kudingeka aqonde ukuthi ubani ababhekana, futhi amalungu ethimba - ukudweba kuwo amandla ngokunqoba.
Sven Royal 2 amakholomu: ezibekiweko kanye nokubuyekeza